Dual Mpitovo sy dipoavatra nozzle - China ZhongPeng Special now
RBSC (SiSiC) desulphurization nozzles no fototra faritra flue entona mafana desulphurization rafitra eo amin'ny hery lehibe sy ny etona amin'ny zavamaniry. Be izy ireo nametraka ao amin'ny flue desulphurizaiton mandatsa-dranomaso rafitra maro hery mafana zavamaniry sy etona amin'ny lehibe.
Single toromarika nozzle
Tamin'ny taonjato faha-21 izao tontolo izao indostria tsy mitsaha-mitombo ny sakany dia hiatrika fitakiana ho madio, mahomby kokoa ny asa.
ZPC orinasa dia nanao ny manao ny anjarantsika mba hiarovana ny tontolo iainana. ZPC specializes amin'ny dipoavatra nozzle famolavolana sy ny fanavaozana teknolojika ho an'ny fanaraha-maso ny fandotoana orinasa. Amin'ny alalan'ny price ambony nozzle fahombiazana sy azo itokisana, ambany entona misy poizina eo amin'ny rivotra sy ny rano no tratra ankehitriny. Nozzle ambony bête ny teti-dratsy mampiseho nampihena nozzle tonga dia mandefa radio, nihatsara dipoavatra fomba fizarana, nohalavaina nozzle fiainana ka nitombo azo itokisana sy ny fahombiazan'ny.
Izany tena mahomby nozzle mamokatra ny kely indrindra droplet savaivony amin'ny tsindry ambany indrindra niafara tamin'ny nihena hery takiana ho an'ny pumping.
• Ny andalana mivelatra ny miolakolaka nozzles anisan'izany ny fanatsarana clog-mahatohitra teti-dratsy, lafiny midadasika kokoa, ary tanteraka tsy fampindramam isan-karazany.
• Ny feno ny fitsipika isan-karazany nozzle teti-dratsy: tangential Inlet, whirl kapila nozzles, sy ny mpankafy nozzles, ary koa ny angovo sy avo-fizotran'ny rivotra atomizing nozzles ny mamono sy ny fampiharana miborosy maina.
• manam-paharoa fahaizana hanao ny mari, mpanamboatra ka vonjeo namboarina nozzles. Miasa aminareo izahay mba hihaona amin'ny governemanta fitsipika henjana indrindra. Afaka hihaona ny fepetra manokana, manampy anao hanatratra rafitra optimum fampisehoana.
hamono ny afo:
Ato amin'ity fizarana ity ny scrubber, ny mafana flue entona dia nahena amin'ny hafanan'ny alohan'ny hiditra ao amin'ny mialoha scrubber na absorber. Izany dia hiaro izay hafanana akory saropady singa ao amin'ny absorber sy hampihenana ny horonam-gazy, amin 'izany fotoana mitombo ny toeram-ponenana ao an-absorber.
Ity fizarana ity dia ampiasaina mba hanesorana particulates, chlorides, na izy roa miaraka amin'ny flue mandatsa-dranomaso.
Izany no tokony misokatra tilikambo dipoavatra izay mitondra ny scrubber slurry ho nifandray ny flue mandatsa-dranomaso, mamela ny fiovana simika izay hamatotra ny SO 2 mba hatao ao amin'ny sump.
Misy tilikambo manana fonosana fizarana. Ato amin'ity fizarana ity, ny slurry dia manitatra eo mifatotra na drafitra fonosana, mba hampitombo ho etỳ ambonin'ny tany nifandray ny flue mandatsa-dranomaso.
Misy tilikambo manana perforated takela ambonin'ny fizarana absorber. Slurry dia napetraka mitovy amin'ny lovia ity, izay samy mikoriana equalizes ny entona ary manome surface faritra mifandray amin'ny entona.
Lena rehetra FGD hiteraka rafitra iray isan-jaton'ny tena tsara ireo vongan-izay nentin'ny ny hetsika ny flue entona nanatrika ny tilikambo fivoahana. Ny zavona eliminator dia andianà convoluted vanes izay fandrika sy condense ny ranoka, mamela azy ireo ho niverina tany amin'ny rafitra. Mba foana droplet ambony fanesorana fahombiazana, ny zavona vanes eliminator tsy maintsy diovina matetika.
• Series ny zoro tsara nozzles mampiasa tangential Inlet mba hamokarana ny whirl
• clog-mahatohitra: nozzles tsy manana faritra anatiny
• fanorenana: ny iray-tapa fanariana
• fifandraisana: flanged na vavy, na BSP NPT kofehy
• Extremely mihitsy aza Mitifitra fizarana
• tenan'ny lamina: hollow cone
• tenan'ny lafiny: 70 ° ho 120 °
• Flow tahan'ny: 5 ka hatramin'ny 1500 gpm (15.3 ny 2230 l / min)
Amin'ny habe hihaona manokana ny marina fepetra arahana
Full Cone miolakolaka Nozzle
ST, STXP, MD, TFXP Series
• Ny voalohany miolakolaka nozzle
• High marary mitsika velocity
• High angovo fahombiazana
• clog-mahatohitra: ny iray-tapa fanamboarana tsy misy faritra anatiny
• fanorenana: ny iray, roa na telo-sombin fanariana
• fifandraisana: NPT na BSP lehilahy kofehy fifandraisana faneva, vehivavy kofehy sy flanged fifandraisana misy amin'ny alalan'ny didy manokana
• tenan'ny endriky: feno sy hollow cone
• Flow tahan'ny: 0,5 ny 3320 gpm (2.26 ny 10700 l / min) flow ambony tahan'ny misy
Ara-nofo: Fihetsiky nampikambana Silicon Carbide (RBSC)
Habe: 0,75 mirefy, mirefy 1,2, mirefy 1,5, 2 santimetatra, mirefy 2,5, 3 santimetatra, mirefy 3,5, 4 santimetatra, mirefy 4.5 sy araka ny fepetra manokana.
Manaraka: single toromarika Desulphurizing nozzle
FGD tenan'ny Scrubber Nozzle
Full Cone tenan'ny Nozzles
Full Jet tenan'ny Nozzle
Hollow Cone miolakolaka tenan'ny Nozzle
Hollow Cone tenan'ny Nozzles
RBSiC miolakolaka tenan'ny Nozzle
Silicon Carbide tenan'ny Nozzle
Sillicon Carbide miolakolaka tenan'ny Nozzle
ventin-Cone tenan'ny Nozzle
miolakolaka Full Cone tenan'ny Nozzle
miolakolaka Full Cone tenan'ny Nozzles
tenan'ny Fan Water Jet Nozzle
Vortex Silicon Carbide tenan'ny Nozzle
Vortex tenan'ny Nozzle
Anaty threaded efa voavitrana RBSC price nozzle
DN40 vortex hollow cone silisiôma carbide nozzle
1.5 mirefy tenan'ny nozzle
silisiôma carbide desulfurization nozzle